Miangatra mamely an’i Shina ve ny media tandrefana? (Fizarana faharoa) · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 29 Aogositra 2018 5:08 GMT
Mifanaraka amin'ny tombontsoan'ny mpamaky ve ny habetsaky ny tatitra momba ny fandotoana sy ny zon'olombelona any Shina? SARY: Marybeth_Whitehouse via Wikimedia Common. CC: AT.
(Ity no faharoa amin'ny lahatsoratra ahitana fizarana roa. Vakio ato ny fizarana voalohany.)
Iray amin'ireo lahatsoratra lehibe notanisain'ny fampahalalam-baovaom-panjakana shinoa ho porofon'ny fitongilanan'ny media tandrefana hamelezana an'i Shina ny habetsaky ny tatitra miiba momba ny fandotoan'ny rivotra. Araka an'i China Daily:
Faizin'ny media tandrefana amin'ny hafatratry ny fandotoan-drivotra ao aminy i Shina. Toy ny mahatsapa ny Tandrefana fa ny tanandehibe shinoa no ratsy indrindra eto ambonin'ny tany eo amin'ny hatsaran'ny rivotra, nefa ny tanandehibe maloto indrindra eto ambonin'ny tany dia any India, Afovoany Atsinanana ary Afrika. Lavidavitra ao amin'ny lisitra ihany no misy an'i Beijing any amin'ny laharana faha-57 na 153 amin'ny filaharana nivoaka farany indrindra.
Araka ny filaharam-pandotoana, na dia tsara kokoa aza ny rivotra ao Beijing miohatra ny any Delhi amin'ity taona 2018 ity (dingana avo dia avo oharina amin'ny dingana tena avo indrindra), tamin'ny tapaky ny taona 2018 ny filaharana no mampiseho an'i Shina sy i India ho laharana faha-12 sy faha-23, araka izay anononana azy izay (izay ambony no ratsy kokoa). Na izany aza dia rariny ny milaza fa azo ampitahaina tsara ireo firenena roa ireo. Fanampin'izany, araka ny fahalalànay, tsy heverin'i Etazonia na ny firenena tandrefana ho fahavalo i India, noho izany tsy misy ny antony manokana ho an'ny media tandrefana hamelezana an'i India.
Tany amin'ny fizarana voalohany amin'ity tantara ity, nanao fitadiavana “shina SY toekaren*” sy “shina SY fandotoana” tamin'ny fampiasana ny Media Cloud izahay. Mba hamotopotorana amin'ny filazana fa mitongilana mamely an'i Shina ny media tandrefana eo amin'ny fitateram-baovao momba ny fandotoan-drivotra, dia nataonay ny fitadiavana “india SY toekaren*” sy “india SY fandotoana” tamin'ny fampiasana toetra mitovy tamin'ny natao itadiavana ilay mifandraika amin'i Shina, mba ahafahana mampitaha ny vokatra.
Asehon'ny Endrika 4 fa manaraka kisary mitovy ny tatitra ataon'ny media tandrefana momba an'i Shina sy i India. Ny tahan'ny vaovaom-pandotoana manoloana ny vaovao toekarena dia 6% ho an'i Shina ary 7% ho an'i India. Na izany aza dia tsy manohana ny filazana fa mifantoka bebe kokoa amin'ny fandotoana any Shina miohatra amin'ny fandotoana any amin'ny firenen-kafa ny lahatahiry.
Endrika 4: Ny isan'ny tantara mifandraika amin'ny toekarena sy ny fandotoana any Shina sy i India mifampitaha, mifototra amin'ny Media Cloud.
Mety misy ihany koa ny manontany raha mifandraika amin'ny fahalianan'ny mpamaky ny hadirin'ny tatitra momba ny fandotoana sy ny zon'olombelona any Shina.
Mba hamakafakana izany fanontaniana izany, dia nampiasa Google Trends, izay manolotra santionan-karoka lahatahiry tsy mitongilana izahay, mba hamantarana ny fahazaran-karoky ny mpamaky. (Ny tondro nampanaraham-penitra amin'ny fitadiavana voafantina Google Trend dia ny fifandanjany amin'ny fitadiavana rehetra amin'ny lohahevitra rehetra ao amin'ny Google amin'io fotoana sy toerana io.)
Namelona fangataham-pitadiavana telo izahay: ‘toekarena shina’, ‘fandotoana shina’, ary ‘shina sy zon'olombelona’. Mba ahafahana manao fampitahana amin'ny fangataham-pitadiavana nataonay tamin'ny Media Cloud, dia nametraka ampaham-potoana telo mitovy izahay: Manomboka voalohany janoary 2013 ka hatramin'ny voalohany janoary 2017, ary nametraka ny faritra ho ‘manerantany’.
Mivaly ho 29, 13 ary 3 araka ny filaharany ny tondro nampanaraham-penitra amin'ny fitadiavana Google Trends. Raha nozarainay amin'ny tondro nampanaraham-penitra ‘shina toekarena’ ny tondro nampanaraham-penitra ‘shina fandotoana’, 45% ny ampahan'ny ‘shina fandotoana’ manoloana ny ‘shina toekarena, ary 10% ny ampahan'ny ‘shina “zon'olombelona”’ manoloana ny ‘shina toekarena’. Raha lazaina amin'ny teny hafa dia liana kokoa amin'ny olan'ny fandotoana ao amin'ny fireneny ny vahoaka ao Shina miohatra amin'ny vahoaka any amin'ny firenen-kafa.
Any amin'ny fizarana voalohany amin'ity tantara ity, namelona fangataham-pitadiavana “shina SY toekaren*”, “shina SY fandotoan*” tamin'ny fampiasana ny Media Cloud izahay. Tao anatin'ny fotoana mitovy amin'ny loharanom-baovao amin'ny teny anglisy, 6% ny ampahan'isan'ny lahatsoratra mifandraika amin'ny fandotoana ao Shina miohatra amin'ny lahatsoratra mifandraika amin'ny toekarenan'i Shina. 27% ny ampahan'isan'ny lahatsoratra mifandraika amin'ny zon'olombelona ao Shina (raha natao hoe ‘shina SY fihetsiketseham-panoherana’ ny fangataham-pitadiavana) miohatra amin'ny lahatsoratra mifandraika amin'ny toekarenan'i Shina.
Endrika 5: Ny isa sy ny ampaha amin'ny tantara mivoaka avy amin'ny loharanom-baovao miteny anglisy (mifototra amin'ny Media Cloud) sy ny tondro nampanaraham-penitra ao amin'ny Google Trends amin'ny fitadiavana isankarazany.
Raha ampitahaintsika ny tarehimarika hita ao amin'ny Media Cloud sy ny Google Trends (jereo ny Endrika 5), ampitahaina amin'ny lahatsoratra momba ny toekarenan'i Shina, 6% ny lahatsoratra amin'ny teny anglisy miresaka fandotoana any Shina, ary 45% ny isam-pitadiavana ao amin'ny Google liana amin'ny fandotoana ao Shina. Amin'ny fampitahana hafa mitovy amin'izany, raha ampitahaina amin'ny lahatsoratra momba ny toekarenan'i Shina, 27% ny isan'ny lahatsoratra mivoaka tamin'ny teny anglisy momba ny zon'olombelona ao Shina, ary 10% ny ny isam-pitadiavana ao amin'ny google liana amin'ny zon'olombelona ao Shina.
Amin'ny teny hafa, mamoaka tantara be kokoa mihoatra noho ny mahaliana mpisera Google momba ny zon'olombelona ao Shina ny gazety amin'ny teny anglisy, nefa mamoaka tantara vitsy kokoa mihoatra noho ny mahaliana mpisera Google raha amin'ny resaka fandotoan-drivotra. Raha atambatra, dia namoaka lahatsoratra vitsy kokoa tsy maharaka ny fahalianan'ny mpisera Google amin'ny lohahevitra ‘miiba’ (ratsy) momba ny fandotoana sy ny zon'olombelona ao Shina ny gazety amin'ny teny anglisy raha oharina amin'ny toekarenan'i Shina (heverina ho lohahevitra ‘miabo’ na tsara).
Na dia eo aza ny vokatra izay mety hanohana ny hevitra fa mety ho manana fironana na famerana ny media tandrefana amin'ny fitaterana lohahevitra sasantsasany mifandraika amin'i Shina, dia tsy manohana ny filazana lazain'ny Shinoa mpaneho hevitra sasantsasany izay milaza fa mitady fotoana anararaotana hanaratsiana, hahasadaikatra na hanimbana an'i Shina ny tsikaritray.
Ny dingana farany dia hanamarinana ny fatran'ny tati-baovao mifandraika amin'ny fahalianana asehon'ny mpamaky. Rehefa liana amin'ny lohahevitra iray ny mpamaky ny media, amin'ny filazalazana ilay lohahevitra, dia tsy azo lazaina ho mandranitra ny fahalianana anaty fikasana—araka ny ilazan'ny governemanta shinoa azy—ho mitsabaka amin'ny raharaha anatin'i Shina.
Endrika 6: ny isan'ny tantara mivoaka sy ny fahalianan'ny mpamaky mandavataona tamin'ny fitadiavana ny voambolana ‘xiaobo’ tamin'ny jolay 2017, mifototra amin'ny Media Cloud sy ny Google Trends.
Ny Endrika 6 mampiseho ny fifandraisana misy eo amin'ny tati-baovao avy amin'ny loharanom-baovao mitovy amin'ny voatonona eo ambony (avy amin'ny Media Cloud) sy ny fahalianan'ny mpamaky (avy amin'ny Google Trends) amin'ny voambolana ‘xiaobo’ manodidina ny fotoana nahafatesan'i Liu Xiaobo ilay nahazo ny loka Nobel tao amin'ny trano nihazonana azy tamin'ny Jolay 2017. Misy ny fifandraisana akaiky eo amin'ny tati-baovao sy ny fahalianan'ny mpamaky, noho izany sarotra ny mitsara hoe iza amin'ny roa tonta no nitranga voalohany.
Endrika 7: ny isan'ny tantara mivoaka sy ny fahalianan'ny mpamaky mandavataona tamin'ny fitadiavana ny voambolana ‘tiananmen’ tamin'ny Jona 2017, mifototra amin'ny Media Cloud sy ny Google Trends.
Ny Endrika 7 mampiseho ny fifandraisana misy eo amin'ny hadirin'ny tati-baovao sy ny fahalianan'ny mpamaky amin'ny voambolana ‘tiananmen’ manodidina ny 4 jona 2017. Hita ao mazava tsara fa miakatra ny fahalianan'ny olona mialoha ny itateran'ny media ny lohahevitra. Isa-taona, amin'ny tsingerintaonan'ny fanorotoroan'ny hery miaramila ny hetsika demaokratika tamin'ny 4 Jona 1989, sivanin'ny governemanta shinoa ny voambolana fototra mifandraika amin'io tranga io. Nefa ny tsikaritray no mampiseho fa mbola mitady torohay momba ireny toe-javatra ireny hatrany ny olona rehefa manakaiky ny tsingerintaona, mialoha ny hampahatsiarovan'ny media azy ireny.
Tsara ny manamarika fa nivoaka an'i Shina ny Google tamin'ny taona 2010 noho ny resaka sivana, ary nidina nankany amin'ny 1,7% ny ampaha-toerany ao amin'ny tsena tamin'ny taona 2013. fa mety manombana ambany loatra ny haavom-pahalianan'ny Shinoa mpisera ny Google Trends, na dia tsy maintsy maneho taratra vondron'olona manokana any Shina mampiasa VPNs hihoarana ny “Rindrin'Afo Lehibe” aza izany.
Voatatitra fa eo am-pikasana hiditra indray any Shina amin'ny endrika ‘voasivana’ amin'ny mili-pitadiavany ny Google.